မြနမာနိုင်ငံလော . . . / ဗမာနိုင်ငံလော . . . ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြနမာနိုင်ငံလော . . . / ဗမာနိုင်ငံလော . . . ?
မြနမာနိုင်ငံလော . . . / ဗမာနိုင်ငံလော . . . ?
Posted by ကိုပါႀကီး on Jul 1, 2012 in Copy/Paste | 8 comments
“ မြန်မာဆိုတာ လူမျိူးရဲ့နာမည် “
ဒေါက်တာသန်းထွန်း– မြန်မာသမိုင်းရှာတော်ပုံ စာအုပ် စာမျက်နှာ (၁၀၃- ၁၀၄) တွင် ယခုလိုဖေါ်ပြထားပါသည်။
“မြန်မာလို့ခေါ်ရင် အစပထမလူမျိုးကိုပဲ ခေါ်တာဖြစ်တယ်။
နောက်တစ်နေရာ တစ်နေရာတည်းမှာပဲ မြန်မာတွေအနေကြာတော့ သူတို့နေတဲ့ နေရာကိုပါ မြန်မာစု၊ မြန်မာရွာ၊ မြန်မာပြည်လို့ခေါ်တယ်၊ မွန်ကျောက်စာ (ခရစ် ၁၁၀၂ ) ထဲမှာ မြန်မာ ကို မိရ်မာ (မွန်ကျောက်စာ ၉ခ/၄၂၊ဒီ ၂၄၊ အိပ်ချ် ၁၂) လို့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်။ ထိလိုင်မင် (၁၀၈၄ – ၁၁၁၃) လက်ထက် နန်းသစ် ဆောက်တဲ့ အခါ မွန်၊ ပျူနဲ့ မိရ်မာ လက်သမားတွေပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒါ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျောက်စာတွေထဲမှာ အစောဆုံးတွေ့ရတဲ့ မြန်မာ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်”
ဒီတော့ “မြန်မာ” ဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးရဲ့မူလနာမည်ပဲ။ တိုင်းပြည်နာမည် မဟုတ်ပါ။
“ ဗမာနိုင်ငံ၊မြန်မာလူမျိုး ”
တို့ဗမာအစည်းအရုံးသမိုင်း (ပထမတွဲ)၊ အခန်း ၇၊ စာမျက်နှာ (၂၁၃-၂၁၇)တွင် ယခုကဲ့သို့ဖေါ်ပြထားပါသည်။
တို့ဗမာ အစည်းအရုံးသည် မူလတည်ထောင်စဉ်မှစ၍ သမိုင်းတလျှောက်လုံး လူမျိုးစုအားလုံး၏ ညီညွတ်ရေးကို အလေးပေးခဲ့ကြောင်း၊ “တို့” ဟူသောစကား၊ “ဗမာ”ဟူသောစကား၊ “ဗမာနိုင်ငံ၊ ဗမာပြည်” ဟူသော စကားတို့ကို တီထွင်၍ တိုင်းရင်းသား စစ်စစ် ဟူသော အမည်နာမ တပ်ဆင်ခဲ့ဖြင့် သိသာထင်ရှားပေသည်။
သခင်များက မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာပြည်ဆိုသော စကားမှာ မြန်မာလူမျိုးသာ နေထိုင်သောမြန်မာနိုင်ငံဟု အဓိပ္ပါယ်ရောက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုသည်မှာ မြန်မာပဒေသရာဇ်များက ပေးသောနာမည်ဖြစ်သည်။ မမှန်ကန်။ ဗမာနိုင်ငံသည် မြန်မာလူမျိုး တမျိုးတည်းနေထိုင်သော နိုင်ငံမဟုတ်။ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ တောင်သူ၊ ပအိုး၊ ပလောင်၊ မွန်၊ မြန်မာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ နေထိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို မြန်မာပြည်ဟု မသုံး၊ ဗမာနိုင်ငံ ဗမာပြည်ဟုသုံးသည်။ သို့မှသာ ညီညွတ်မှန်ကန်မည်။ ဗမာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ဗမာဟု ခေါ်သည်။
မွန်လူငယ် မွန်သင်းလှိုင်၊ မွန်သန်း၊ မွန်ထွန်းဦးစသည်တို့သည် သခင်သင်းလှိုင်၊ သခင်သန်း၊ သခင်ထွန်းဦး
ထားဝယ်လူငယ် ကိုဗသိန်းတင်၊ကိုစံဝင်း၊ ကိုဗဆွေ စသူတို့သည် သခင်ဗသိန်းတင်၊ သခင်စံဝင်း၊ သခင်ဗဆွေ
ရခိုင်လူငယ် ကိုအောင်ကြီး၊ ကိုစန်ရွှေ၊ ကိုဗတင် စသူတို့သည် သခင်အောင်ကြီး၊ သခင်စန်ရွှေ၊ သခင်ဗတင်
ရှမ်းလူငယ် ကိုခွန်တီး၊ ကိုခင်မောင်၊ ကိုငွေ ကိုသစ် စသူတို့သည် သခင်ခွန်တီး၊ သခင်ခင်မောင် (ကမာရွတ်)၊ သခင်ငွေ (ဗိုလ်စောအောင်)၊ သခင်သစ် (ဗိုလ်စောနောင်)
ချင်းလူငယ် ကိုဝမ်းသူမောင်၊ ကိုအောင်မင်း စသူတို့သည် သခင်ဝမ်းသူမောင်၊ သခင်အောင်မင်း
ပအိုးလူငယ် ကိုသိမ်းမောင်၊ ကိုဗရွှေ စသူတို့သည် သခင်သိန်းမောင်၊ သခင်ဗရွှေ
ကရင်လူငယ် ကိုဘိုးကွယ်(မြောင်းမြ) ၊ ကိုစိုန်ရွှေ(မြောင်းမြ) တို့သည် သခင်ဘိုးကွယ်၊ သခင်စိန်ရွှေ ဟူ၍ သခင်အမည်ခံ ယူ ခဲ့ကြသည်။
ထို့အတူ မစ္စတာနာရရန်ဆင်၊ နာရီဒူး၊ ဆင်းဂုပ္ပတား၊ ဘဲလျား၊ အပ္ပနား စသော အိန္ဒိယအမျိုးသားများသည် သခင်နာရရန်ဆင်၊ သခင်နာရီဒူး၊ သခင်ဆင်းဂုပ္ပတား၊ သခင်ဘဲလျား၊ သခင်အပ္ပနား
ကိုတိတ်ဂွမ် (ရန်ကုန်)၊ ကိုဇေယျခေါ် အင်ပီး (မြောင်းမြ)၊ စူးတူး (ခေါ်) ကံဆင့်(မြောင်းမြ)၊ ချိန်တိတ်(ညောင်ဦး)၊ ဂင်စိန်(မြိတ်) စသော တရုတ်အမျိုးသားများသည် သခင်တိတ်ဂွမ်၊ သခင်ဇေယျ၊ သခင်ကံဆင့်၊ သခင်ချန်တိတ်၊ သခင်ဂင်စိတ် စသဖြင့် သခင်ဘွဲ့ခံယူပြီး တို့ဗမာအစည်းအရုံးတွင်ဝင်ရောက်ကာ တိုက်ပွဲအမျိုးမျိုးကို ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်။
“ တို့ဗမာ— ၊ ဟေ့— တို့ဗမာ၊ ဗမာပြေတဝှမ်းအကုန် တို့အိမ်မှတ်ပါ၊ တို့ယာမှတ်ပါ၊ အဲဒါ တို့ဗမာ”ဟု ထည့်သွင်းသီဆိုခဲ့ကြသည်။ ထို့အတူ မူလနိုင်ငံတော် သီချင်းတွင်လည်း “ဗမာပြေ”ဟုသာ ထည့်သွင်းရေးသားသီဆိုခဲ့ကြသည်။
နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြသည့်ပါတီအဖွဲ့အစည်းများ၏ အမည်များကိုလည်း ဤသို့ ရေးသား ဖေါ်ပြခဲ့ကြပါသည်။
– ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂ (ဗကသ)
– ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗကပ)
– ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမားအစည်းအရုံး — သဖြင့်ဖြစ်သည်။
တို့ဗမာအစည်းအရုံးဝင် တိုင်းရင်းသားလူငယ်များကလည်း ၎င်းတို့အမည်ကို ဤသို့ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။
ထို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟု ဖြစ်သင့်သလား ?
ပြည်ထောင်စုဗမာနိုင်ငံတော်ဟု ဖြစ်သင့်သလား ?
ကျနော်က ဒီတခါ ခင်ဗျားပို့စ်ကို အရင်ဆုံး ကွန်မန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခေါ်အဝေါ် ကိစ္စက တော်တော်ပြောကြတယ်။ တကယ့် အတွင်းသား အနှစ်သာရကတော့ အားလုံးစုပေါင်းနေခြင်း ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ။ အခေါ်အဝေါ်က အပေါ်ယံပါ။ အရေးကြီးတာက အနှစ်သာရပါ။ နောက်ပြီး ကျနော်ကိုယ်တိုင် ဆောင်းပါးတွေမှာ ဗမာဆိုတာ လူမျိုးတမျိုး မြန်မာဆိုတာ အားလုံးပေါင်းလို့ ရည်ညွှန်းပြီး ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ဒါလက်ရှိ အာဏာရ အစိုးရက သတ်မှတ်ထားတာပါ။ ဒီအခေါ်အဝေါ်ကို မကြိုက်တော့လည်း နောင်ပြည်သူ တင်မြှောက်တဲ့ အစိုးရပေါ်လာရင် ပညာရှင်တွေ တိုင်ပင်ပြီး ပြည့်သူဆန္ဒမဲခံယူပြီး ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ ပန်းသီးကို ပန်းသီးလို့ ခေါ်ပြီးစားရင် ချိုမှာပဲဖြစ်သလို သံပရာသီးလို့ ပြောပြီး စားရင်လည်း ချိုတဲ့အရသာပဲ ထွက်မှာပါ။ အမှန်တော့ ကျနော်လည်း ဆရာကြီးစာတွေကို တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူပြောတိုင်းတော့လည်း လက်မခံပါဘူး။ ကျနော်က သူ့စာတွေကော အခြားလူတွေရဲ့ စာတွေရော မျှပြီးဖတ်ချင်ပါတယ်။
What ever call us to ဗမာ or မြန်မာ. I will not complain.
BUT…. In english word i prefer to call us ” BAMAR ” ( I hate the word ” Burma ” )
အာဏာရှင်ခေတ်မှာ အာဏာရှိသူက ကြိုက်သလို သတ်မှတ်လိုက်ပေမယ့် ပြည်သူကို အလေးထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ “ဗမာ”၊ “မြန်မာ” ဝေါဟာရပြဿနာဟာ နိုင်ငံနေပြည်သူတိုင်းက သဘောတူသတ်မှတ်ပေးရမှာပါ။
ရွာညီရင် “ဤ” ကို “ကျွဲ” ဟု ဖတ်လို့ ပြဿနာမရှိပေမယ့် . . .
ရွာမညီရင်တော့ အမှန်ကို စိစစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့။
after one night thinking about your post i have second thought…..
When i was young. I learned the following poem or something from Doh Bamar Asee Ayone or something like that organization….
Bamar Sar The Doh Sar
Bamar Sagar The Doh Sagar
Doh Pyi Ko Chit Par
Doh Sar Ko Lay Saw Par
Doh Sagar Ko Lite Nar Par…….
According to this…..
What is bamar sar ? This sar is for one tine yin thar group or for whole nation.
If you consider to call our nation with the word of “Burma”, according to this poem it is mean this country is only for Bamar.
For my own wish,
I don’t want to use Burma. This word associated with losing, pressing, colonist, slavery, Kyun Tha Bauk, Arnarshin system, poor, bad image on international relation ( every one who go outside of myanmar know that, when we telling we are come from burma we get bad respond form them ) and so on….
WE NEED TO START…… NEW, FRESH, GOOD IMAGE IN INTERNATIONAL.
So. how do you think to call Myanmar or other new suitable name?
ကျွန်တော်ကတော့ ဥပမာ တခုလေးပေးကြည့်ပါမယ်…ကြိုက်သလို ယူနိုင်ဆပါတယ်..
ဘုရား ပရိနိဗာန်စံတာကို ကလေးတစ်ယောက်က မသိလို့ မေးလာရင် လူကြီးက ဘုရားသေတယ်
လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်..ဘုရားပရိနိဗာန်စံတယ်လို့ပြောရင် ကလေးမသိ သလို…
သေတာကို သိဖို့က အဓိကလား?..ပရိနိဗာန်စံတယ် အသံထွက်မှန်မှန်နဲ့ ဆိုနိုင် ဖို့က အဓိကလား?..
မြန်မာဖြစ်ဖြစ်၊ ဗမာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေ၊ကိုယ့်လူမျိုး
လူမျိုး ဗမာ၊ နိုင်ငံ မြန်မာ ကသာ